Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee Victoriya oo Canbaareysay dhaqan Xumada gumeysiga Ethiopia kula kacay shacabka Ogadeniya
Jaaliyada Ogadeniya ee Victoriya oo Canbaareysay dhaqan Xumada gumeysiga Ethiopia kula kacay shacabka Ogadeniya
Posted by ONA Admin	/ November 26, 2012
25/11/2012 Waxeey Jaaliyada S/Ogadenia ee Victoria usoo gudbinaysaa cambareyn shirkii foosha xumaa ee gumeysiga iyo Gacanyarashiisu (Abdi Ubo) ku qabteen Magaalada Jigjiga,
Waxaa malmahii lasoodhafay ninka gacanyaraha u ah gumeysiga Ethiopia ee wadanka Ogadenia iyo kalkaaliyaashisu ay sameynayeen waxyaabo lalayaabo oo dhulka Soomaalida Ogadenia horay loga arag. Waxaa dhamaan dadka kusugan dagmooyinka ama magaalooyinka Ogadeniya lagasoo aruuriyay si qasaba dad aad u farabadan, dadkaas oo isugu jira Maxaabis horay diljir iyo dhibaato lagu haayey markoodi hore in laxasbay in ey qoralo ka akhriyan shirka, waxaa kalo ka midha dadkaas odayaal, culumo iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayagoo lagu qasbay waxyaabo diintina iyo dhaqankeena ka soohorjeeda.
Waxaan lasoconaa in dadkii shirkaas ka hadlay qaarkood ladilay, jirdil iyo dhibaatadii lagu hayana lagu siikordhiyeey. Waxaa gumaysiga lagu yaqaana laba wajiga iyo dhaqanxumada, Marka ey guul darana joogaan sibadiyaan xasuuqa shacabka. Waxaan lasocona in Gumeysiga Ethiopia iyo kalkaaliyashisa sida Abdi Ubo ey naf lacaariyihiin and guushina u sohoyanayso shacabka Ogadenia
Waxeey jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria Canbareynaysaa shirkii foosha xumaa ee kadhacay Jigjiga, shirkaas oo waxyabaha astaanta diinteena, dhaqankeena iyo xaguuqda bina’aadanka kamid aheen, sida qasabka shacabka aan waxba gaysan horana u dulmanaa.
Waxeey Jaaliyada u direysaa dhamaan bulshooyinka kala duwan sida Soomaliweyn, wadamada geeska Africa, Haayadaha xuquuqul insaanka, Qaramada Midoway iyo wadamada Cadaalada iyo sinaanta ilaaliya inay talaabo ka qaadaan dhaqanxumada eey gumaysiga Ethipia u geysanayaan shacabka Ogadeniya.
Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria, Australia